कसरी छाती पुल
बच्चाहरु माथि बढ्दै र अब त स्तनपान खाँचो धेरै छौं। एक बच्चा 1.5-2 वर्ष हुँदा यो सामान्यतया हुन्छ। तर कहिले काँही तपाईं स्तन-खुवाउने धेरै पहिले केही कारणले बन्द गर्न आवश्यक छ। यो आमाको रोग वा काम एक प्रारम्भिक बाहिर निस्कन सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा, रुचाउने महिला प्रश्न उठ्छ अघि रोक्न रूपमा गर्न र स्तन कसरी पुल? यो दुवै अभिनेता लागि पीडारहित थियो कि मुख्य कुरा।
आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न निश्चित हुनुहोस्। निस्सन्देह, निहत्था को मानक विधिहरू अवस्थित छैन। यो सबै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक कारक मा निर्भर गर्दछ। यसलाई त्यहाँ आमा को स्वास्थ्य को लागि कुनै परिणाम हो भनेर यो महत्त्वपूर्ण छ।
गर्न पहिलो कुरा स्तन दूध उत्पादन बन्द गर्न पुल छ। यदि सम्भव छ भने, यो शरीर नै उत्पादन र दूध को गुणस्तर कम हुँदा क्षण चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। कसरी यसलाई केही कारक मा फेला पार्न। पहिले, यो सामान्यतया बच्चा 1.5-2 वर्ष हुँदा हुन्छ। क्षणमा दूध थप संरचना मा एक colostrum जस्तै छ। एंटीबडी र हर्मोन यसलाई मा निहित को एक ठूलो संख्या, स्वतन्त्र रुचाउने लागि बच्चा तयार र यसको प्रतिरक्षा बलियो बनाउन। छोराछोरी निहत्था र कम बिरामी, शरीर द्वारा अप यो बिन्दु गर्न रिजर्व धन्यवाद सहनु जस्तो देखिन्छ किनभने यो एक राम्रो समय छ। यो वास्तवमा वैज्ञानिक साबित भएको छ।
त्यसैले, कसरी स्तन पुल? आवश्यक दूध अवशेष Decant। तुरुन्त कि पछि, एक दबाव पट्टी बनाउन। यो एक लोचदार पट्टी, फुलेको नसाहरु लागि प्रयोग गरिन्छ जो प्रयोग गर्न सम्भव छ। उहाँले धेरै राम्रो गुणस्तर हुनुपर्छ। उच्च कपास सामग्री एक लोचदार पट्टी, तर तंग छैन बनाउँछ। यस्तो छनौट। को पूर्ण स्तन ढाक्न समान लाउने बनाउन। यो जो महिला शरीर को लागि, र विशेष शरीर को यो भाग लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, रगत सामान्यतया निरन्तर चलिरहनु गर्न अनुमति दिन्छ। लाउने को फलस्वरूप गांठ र छाप गठन हुँदैन। तिनीहरूले भने, त्यसपछि यो गरिबी लाउने गरे इङ्गित गर्दछ। यो विधि, पाठ्यक्रम, एक सानो साँस पूर्ण शक्ति संग interferes, तर स्तन दूध भरिएको छ, र धेरै दर्दनाक छ जो एक पत्थर, जस्तै बन्न छैन।
एकै समयमा स्तन तान्ने lactation कम कि लागूपदार्थ लाग्न सक्छ। यो गर्न, तपाईंले आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ, र उहाँले सही चिकित्सा र औषधिको खुराक नियुक्त गर्नेछ। बीचमा यस्तो लागूपदार्थ पहिचान गर्न सकिन्छ "Dostinex", "Bromkreptin" आदि
त्यहाँ बेचैनी र स्तन खींच पछि छाप छ भने, यो पट्टी हटाउन र फेरि उनको दूध व्यक्त गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक अन्तिम ड्रप व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईं माथि वर्णन थियो, फेरि छाती तान्नुहोस्। आवश्यक रूपमा यो प्रक्रिया गरेर।
धेरै त्यो क्षण camphor मा हात मा छ राम्रो। को छाती पुल गर्ने अधिकार पहिले यो मतलब छाती चिकनाना। यसको प्रभाव अन्तर्गत दूध उत्पादन कम छ र त्यहाँ कुनै पीडादायी छाप छ।
तपाईंले सही सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरेको छ भने, स्तन मा दूध को राशि तेस्रो दिन मा धेरै कम हुनेछ। बिस्तारै, शरीर स्तन दूध उत्पादन रोक्छ। तर सर्तहरू सबै महिलाको शरीर अवस्था निर्भर र फरक हुन सक्छ।
तपाईं सही स्तन निकाल्न अघि, तपाईंले आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ।
यो विधि बारे विवाद लामो कायम छ। तर lactation को समापन विधि को विकल्प विशिष्ट जीव मा निर्भर गर्दछ। म व्यक्तिगत तपाईं चयन गर्न छाती पुल गर्नुपर्छ। तर सबै विशेषज्ञहरु एक राय मा, हानि को बिना गर्नुपर्छ बच्चा र आमा सँग सहमत हुनुहुन्छ। र स्तनपान, बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो छ विशेष गरी जीवन को पहिलो महिनामा, सम्झना। आफ्नो आमा, उहाँले त आवश्यक जो संग indissoluble बन्धन - उसलाई प्रतिरक्षा र विकास र विकासका लागि आवश्यक सबै, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण दिन्छ।
"बेला" गैसकेट। स्त्री स्वच्छता पैड: समीक्षा, मूल्य
कारणहरू र लक्षण: योनी को microflora उल्लङ्घन
मनपर्ने आकार। महिलाको योनी
यो माइक्रोवेव मा जार जीवाणु रहित बनाउनु गर्न सम्भव छ?
किन खुट्टा तान्न?
भेनिला cupcakes: एक उम्दा मिठाई पकाउन कसरी
सैमसंग एससीएक्स 3400. एमएफपी सैमसंग एससीएक्स 3400. प्रिंटर सैमसंग एससीएक्स 3400
Miso पेस्ट र Miso सूप: जापानी भोजन को रहस्य सिक्नुहोस्!
गर्भावस्था को पहिलो संकेत: Smells को तिरस्कार, मुड swings, स्वाद परिवर्तन
लोक उपचार: कसरी रक्सी पिउने रोक्न। कसरी घर मा आफ्नै पिउने रोक्न
Lipoic एसिड पातलो यदि उपयोगी छ